ပန်းဆက်လမ်း၊ ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ၊ (ဒု-ကြိမ်)
အမာ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု 59 ရှိပါသည်။
Wut Hmone Aye – September 1, 2020
စာအုပ်အစကစစ်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခနဲ့စခဲ့ရပီး အမာတို့သားအမိရဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ကြားက အသက်ရှင်အောင်ပြေးလွှားခဲ့ရတာတွေကို ကွင်းခနဲကွက်ခနဲမြင်အောင်ရေးပြထားတဲ့ဆရာမ မွန်ရဲ့အရေးအသားတွေထဲနစ်မြောသွားပီး ကိုယ်ပါစစ်ထဲလိုက်ပြေးနေရသလိုမျိုး ဗုံးကျင်းထဲလည်းကိုယ်ပါရောပြေး အမာတို့သားအမိနဲ့အတူ ဝမ်းလည်းနည်း ကြောက်လည်းကြောက်နဲ့ အဆိုးဆုံးကတော့အမာ့မောင်လေး မောင်ဆန်းမောင်သေတဲ့ညပါပဲ
တစ်ပြိုင်တည်းမှာလောကဒဏ်တွေခါးစည်းခံခဲ့ရတဲ့ အမာ့အမေ မမရဲ့မာနနဲ့ သမီးအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာကိုကိုယ်ချင်းစာမပေးနိုင်လောက်အောင်သမီးအပေါ်ချယ်လှယ်တဲ့မမကိုအမြင်ကတ်လေလေ အမာရဲ့အမေအပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကိုလေးစားအသနားပိုရပြန်တယ်
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မဖြောင့်ဖြူးလှတဲ့အချစ်ခရီးမှာ အမာ့ကိုသနားပိုရ သူ့အခြေနေနဲ့ဆိုသစ္စာရှိရှိချစ်နိုင်လွန်းတဲ့ဘမောင်ချိန်ကိုချီးကျူးရ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့မမကိုလည်းစိတ်တိုရနဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်ပီးစာအုပ်ကိုလက်ကမချနိုင်ပြန်ဘူး
ရှေ့ဆက်မိသားစုဘဝစပြန်တောအမာ့ကိုအားမလိုအားမရဖြစ်ရ ယောက္ခမနဲ့သမက်ဖြစ်နေကြပုံကိုရီလည်းရီချင်စိတ်လည်းတိုချင်နဲ့ တစ်မျိုးရင်မောရပြန်တယ်
ပညာတော်သင်သွားမယ့်မိန်းမကိုနောက်ဆံမတင်းစေချင်တဲ့ ဘမောင်ချိန် ရဲ့အမာ့အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ကိုလေးစားမိပီးအမာပြန်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ချိန်မှာပြန်မလာစေချင်ဘဲပညာဆက်သင်ချင်စေတဲ့အထိ အမာ့နေရာကို ကိုယ်တိုင်ဝင်နေမိတယ်
နောက်ဆုံးပီးခါနီးအထိကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စာရေးသူနဲ့အမာရဲ့ဆက်စပ်ပုံလေးကိုအလောတကြီးလိုက်ရှာရသေးတယ် (ကိုယ်ကစာရေးသူရဲ့အဖွားအကြောင်းကို အရင်တည်းကစိတ်ဝင်စားနေတာကိုး)
ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပီး အရင်ခေတ်ကပညာရေးကိုအားကျမိ ပြန်လိုချင်မိတယ် (၇တန်းနဲ့တင်အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းရေးနိုင်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အံသြရသေးတယ်)
အမာတို့နေသွားတဲ့ နဝရတ်ရိပ်သာရှေ့ဖြတ်သွားတိုင်း အမာ့အကြောင်းလေးတွေးမိတဲ့အထိ ပဲခူးကလပ်ရှေ့ဖြတ်သွားတော့လည်း အရင်လိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မဟုတ်ဘဲ သူ့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုသိပီး အဲဒီရှေ့ဖြတ်ရင် တကြည့်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အထိ စာရေးသူရဲ့အရေးသားကငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်
အမာစာအုပ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားပီး ဖတ်ချင်လွန်းလို့ pre order အယောက် ၅၀၀ ထဲပါအောင် မှာပီး ရောက်လာတော့လက်ကမလွှတ်ချင်အောင်တစ်ဆက်တည်းဖတ်ဖြစ်သွားတဲ့ ဆရာမမွန်ရဲ့အရေးအသားက အမာ့လိုပဲသိမ်မွေ့လွန််းတော့ တကယ်ဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့စာအုပ်လေးပါလို့
Zin Mar Aye – September 1, 2020
စစ်ရဲ့အနိဋ္ဌာရုံတွေကြား ကိုယ့်ကို ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ အမာ၊ တစ်ဦးတည်းသောမောင်လေးဆုံးတော့ ဝမ်းနည်းအားငယ်ရမယ့်အစား “အမာတို့ နှစ်ယောက်ကြီးများတောင် ရှိပါသေးတယ်”ဆို တဲ့ အားမာန်အပြည့်နဲ့ အမာ၊ တောမှာမွေးတဲ့ တောသူမလေးကို ပညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဝင်ဆန့်စေချင်တဲ့ မိဘရဲ့ ဆန္ဒတွေအောက်မှာ ဘဝကို ပုံဖော်ပြသွားတဲ့ အမာ၊ ဘဝတက်လမ်းအတွက် လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ကို အားကျစေခဲ့တဲ့ အမာ၊ ရှေးရိုးဆန်တဲ့ မိဘနဲ့သားသမီးကြားက ဆက်ဆံရေးကို လှစ်ဟပြသွားတဲ့ အမာ၊အမေတစ်ယောက်ရဲ့ နူးညံ့ကြင်နာမှုတွေ မဖော်ပြပဲနဲ့ သမီးနဲ့အမေကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြသွားတဲ့အမာ၊ ခေတ်နဲ့အညီ အနောက်တိုင်းဆန်တဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆ နေထိုင်မှုတွေနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပေမယ့် တိုင်းပြည်အပေါ် မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ လူငယ်ဘဝကို ပြောပြပေးတဲ့အမာ ၊ခက်ခဲတဲ့ အချိန်မှာတောင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘဝကို လိုရာပုံသွင်းယူနိုင်တဲ့ လူငယ်ဘဝကို အားကျစေခဲ့တဲ့ အမာ၊ အသွင်မတူ စရိုက် မတူ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ဘဝတွေ မတူညီပေမယ့်လည်း လူနှစ်ယောက်ကို နားလည်မှုတွေနဲ့ သက်ဆုံးတိုင် ပေါင်းဖက်ပေးခဲ့တဲ့အမာ၊ တစ်သက်လုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ တွေဝေခဲ့ပေမယ့် မွေးစားသားလေးကို စွန့်လွှတ်ရမှာဆိုးတဲ့ မိခင်စိတ်ကြောင့် ပညာရေးကို စွန့်လွှတ်ပြီး မိသားစုဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အမာ၊ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးကို အိမ်မက် ထဲကအတိုင်း ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးပုံဖော်ခွင့် ရသွားတဲ့ “အမာ” ဆိုတဲ့ မြန်မာဆန်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေး တစ်ယောက်အကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်လေးကို ရင်ဘတ်ထဲထိရောက်အောင် ရသမျိုးစုံနဲ့ ပုံဖော်ပြသွားတဲ့ ဆရာမ မွန်ဟော်စီရဲ့ အမာ။
#အမာ ဖတ် ပြီး ခွန်အားတစ်ခု ရလိုက်ပါတယ်။
Htet Wai – September 1, 2020
ဆရာမ မွန်ဟော်စီ (Mon Halsey) ရေးတဲ့စာတွေကို ဟိုးအရင်ကတည်းက Facebook ပေါ်ကနေ နှစ်ခြိုက်စွာ wall ပေါ်မှာ share တွေ လုပ်ခဲ့ပြီး သဘောကျမိပေမယ့် အပြင်မှာ စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးတာ ဒီစာအုပ်က ပထမဆုံးပါပဲ။ စာပေအမျိုးအစားထဲမှာ ရသစာပေကို ဖတ်ရတာ နှစ်ခြိုက်မိသူမို့ အရင်က ဆရာမ ခင်နှင်းယု၊ ဂျာနယ်ကျော် မမလေး၊ မစန္ဒာ ၊ စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာ၀တီ ) ၊ ခင်ခင်ထူး အစရှိတဲ့ စာရေးဆရာတွေ ရဲ့ စာအုပ်တွေပဲ ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခု‌တော့ #အမာ ကိုဖတ်ပြီး ဆရာမ မွန်ဟော်စီရဲ့စာအုပ်တွေကို ရှာ၀ယ်ပြီး ဖတ်ကြည့်ချင်လာတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးပြီးချင်း ဆရာမကို စာရေးတာ‌ တော်လိုက်တာလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲချီးကျူးမိပါတယ်။ စာအုပ်ကို စပြီး ကိုင်လိုက်ချိန်က စပြီး ပြီးတဲ့အထိ မချဖြစ်အောင်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတယ်။
စာအုပ်မှာ နောက်ခံ ‌သမိုင်းကြောင်းတွေကို သေချာအားအတော်စိုက်ပြီး လေ့လာထားမှန်းသိသာစေပြီး စာဖတ်သူ မငြီးငွေ့အောင်ရော နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကို သိရှိအောင်ရော ရေးသားနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ နောက်လာမယ့် ခေတ်အဆက်ဆက်ရဲ့ က‌လေး‌တွေကို မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂျပန်ခေတ် ၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ခေတ်ရဲ့ အခြေအနေများကို လေ့လာ သိရှိ နိုင်မယ့် စာအုပ်ပါ။ တချို့ စာမျက်နှာတွေရဲ့ အောက်မှာ ရှင်းလင်းချက်တွေ ရေးပေးထားတာကအစ စာရေးသူရဲ့ တိကျသေချာမှုနဲ့ စေတနာကို မြင်‌တွေ့ရပါတယ်။
စာအုပ် ကို စဖတ်ဖတ်ခြင်း ၁၉၄၂ ခုနှစ် ပထမဆုံး အမာ့ကို ဆေးရုံမှာ တွေ့ကတည်းကစပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် အသက် ၈၄ နှစ်မှာ ဆုံးပါးသွားတဲ့အထိ အမာနဲ့ အတူ လိုက်ပါခဲ့ရတယ်။
အမာပျော်ရင် ပျော်ရတယ်။ အမာ ငိုရင် ငိုရတယ်။ အမာ အားတင်းရင် ကိုယ်လည်း အားတွေ ရှိလာသလို ခံစားရတယ်။
အမာတို့အိမ်လေး ဗုံးတွေကြားထဲ မီးတောက်‌တွေ ကြားထဲမှာ စိစိညက်ညက် ကြေသွားတော့ အမာ ခံစားရသလို ရင်ထဲမှာဆို့နင့်သွားရတယ်။ စစ်ပြေးရင်း အလောင်းတွေပဲ ရှိတော့တဲ့ရွာမှာ တညအိပ်ရပြီး မောင်လေး ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန် အမာ့ရဲ့ အမေက ငါတို့ ၂ ယောက်ပဲ ရှိတော့တယ် ဆိုတဲ့ အခါ အမာက အမာတို့ ၂ ယောက်ကြီးများတောင် ရှိနေပါတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာတဲ့ အမာ့ကို တော်တော် အထင်ကြီးသွားရတယ်။
ကိုဘမောင်ချိန်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာလည်း အမာနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ရတယ်။ ရင်ခုန်ရတယ်။ ရင်တုန်ရတယ်။ စာအုပ်မှာ အပြင်က အမာ့ပုံတွေ၊ ကိုဘမောင်ချိန် ပုံတွေနဲ့ အမာ့မေမေပုံတွေရော တခြား ဇာတ်ဆောင်ပုံတွေပါ နေရာတကျ ထည့်ပေးထားတော့ စာအုပ်ကို ဖတ်လိုက် သူတို့ကို မြင်ယောင်လိုက်၊ တခါတလေ စာအုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံတွေ အမူအကျင့်တွေ ပါလာရင် ဓါတ်ပုံတွေကို ပြန်လှန်ပြီး မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်ကြည့်မိတယ်။
အဓိက ဇာတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ အမာ့အမေကလည်း သနားချစ်ခင် လေးစားစရာပါ။ သမီးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး‌ လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံလာတဲ့ အမေတယောက်ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုနေမလဲ ခန့်မှန်းမိတယ်။ ဘမောင်ချိန်က အစစ အရာရာ ပြည့်စုံပေမယ့် သဘောမတူတာလည်း မိခင်တယောက်ရဲ့ ရင်ထဲကို ၀င်ပြီး နားလည်ခံစားမိတယ်။
စစ်‌ဘေးဒဏ်ကို ကြံကြံ့ခံ‌ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကာ လောကဓံကြုံသမျှကို ဇွဲမလျှော့ပဲ ကြိုးစားခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ ၆၁ ယောက်မြောက် ဆရာ၀န်မလေးဖြစ်လာတဲ့ အမာ။
ထို့အပြင် London ကို ပညာတော်သင်စေလွှတ်ခံရတဲ့ အမှန်တကယ် ရှိခဲ့သော မြန်မာမလေး အမာ့အတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
တော်တန်ရုံလောကဓံမှာ မလဲပဲ အားတင်းထနိူင်ဖို့ အမာ့ကို ကြည့်ပြီး အားယူရဦးမယ်။
ပြီးတော့ ဘမောင်ချိန်က သူ့ဇနီးအတွက် အမြဲဂုဏ်ယူရသလို
အမာကလည်း အ‌တွေ့အကြုံ ဉာဏ်ပညာ အစစအရာရာ သာပြီးguidance သဖွယ် အားကိုးရ‌သော ခင်ပွန်းကို ချစ်ခင်လေးစားအားကိုးတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ရေးဟန်လေးတွေကိုလည်း သဘောကျမိတယ်။
စာအုပ်ကို စဖတ်ကတည်းက နောက်ဆုံး နောက်ဆက်တွဲ စာစု‌တွေထိ တလုံးမကျန်အောင် အကုန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။အဲလိုဖတ်ဖို့လည်း စာအုပ်က ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ လန်ဒန်က အမာ တက်ခဲ့တဲ့ ‌ကျောင်းပုံတို့ အဖွားမွေးနေ့ အမှတ်တရ ပုံတို့ပါ မကျန်သေချာကြည့်မိတာ။
1964 institute of child health မှာ အုပ်စုလိုက် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံမှာလည်း အမာ့ကို သေချာ ရှာကြည့်မိပြန်ရော။
စာအုပ်ရဲ့ ခေါ်ဆောင်ရာကို မျှောလွင့်လိုက်ပါလာပြီး အကုန်ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဖတ်လို့ မ၀သေးသလို ခံစားရတယ်။ စိတ်ထဲမှာ မအိမ်ကံ စာအုပ်လို ခေတ်အဆက်ဆက် အမာရဲ့ မြေး စာရေးသူရဲ့ ခေတ်ထိ ရောက်အောင် လောကဓံ‌ကို အားတင်းရင်ဆိုင်ဖြတ်‌ကျော်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ အားမာန်တွေကိုလည်း ဆက်ပြီး ဖတ်ချင်နေမိသေးတယ်။
ဒီ့ထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် ရေးချင်ပေမယ့် ပထမဆုံး review ရေးတဲ့ အတွေ့အကြုံဖြစ်လို့ ရေးချင်တာတွေကို စိတ်ထဲက အကုန် ဆွဲမထုတ်နိုင်သေးဘူး။ သေချာတာတော့ ဒီစာအုပ်လေးကို သေချာ သိမ်းထားပြီး သမီးတော် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်‌ ရောက်တဲ့အခါ ဖတ်စေချင်တယ်။ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ တပည့် ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတွေရော အသိမေမေတွေကိုရော သုတ ရသ အစုံ ပေးနိုင်သော real story အတ္ထုပတ္တိ စာအုပ်လေး ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်း‌ပေးဖြစ်မှာ အသေချာပါပဲရှင်။
Nay Myo – September 26, 2020
ကိုလိုနီခေတ်ကာလမှာ အမာဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဆေးရုံးပေါ်မှာ ခြေထောက်ကျောက်ပတ်တီးစီးထားခဲ့စဉ် လေယာဉ်ပေါ်က ကြဲချတဲ့ဗုံးတွေကြားမှာ လောကဓံက အသက်ရှင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၆၁ ယောက်မြောက် ဆရာဝန်ဖြစ်မည့် ဆေးကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖခင်၏ရည်မှန်းချက်ကို ဖြည့်စီးပေးခဲ့နိုင်သော သမီးလေးတစ်ယောက်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ဆောင်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အမာရဲ့မိခင်က သမီးကျောင်းဆက်တတ်နိုင်ရန် ထားရှိတဲ့ မေတ္တာဟာ ချိန်ခွင်နှင့် အလေးတစ်စုံက ခမ်းနားစွာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရဲ့ Social Event ပွဲတစ်ခုမှာ ရှက်တတ်ကြောက်တတ်တဲ့ သူမတစ်ယောက်ဟာ တွဲကဖို့ခေါ်မှာကို အရမ်းကြောက်ရွံ့နေသူရဲ့ ချစ်ဇတ်လမ်းလေးရဲ့အစ ။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသော ရည်းစာစာတစ်စောင်ရဲ့ ရင်ထဲထိ လှုပ်ခတ်နိုင်မူမှာ ကြည်နူးဖွယ်။ အခြေအနေမတူသော ဘဝနှစ်ခုရဲ့ စုံစည်းဖို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော အချစ်ဇာတ်လမ်း။ စစ်ဘေးကာလအတွင်း အမာသည် ဗုံးများရှောင်ကာ ပြေးလွှာနေရသော်လည်း မောင်ဘချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်ကျောင်းကိုတတ်ခဲ့ အားကစားလုပ်ခဲ့ ချမ်းသာစွာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သူတစ်ယောက်။
ဘမောင်ချိန်နှင့် အမာတို့ရဲ့ မဖြောင့်ဖြူးသော အချစ်ဇတ်လမ်း။ အမာရဲ့မိခင်၏ သြဇာသည် အမာ့အပေါ် လွမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်မူ။ ဘမောင်ချိန်နဲ့ အမာရဲ့ မိခင်တို့၏ မထိခလုတ် ထိခလုတ် ဇာတ်လမ်း…အမာတစ်ယောက် မိခင်နှင့်ချစ်သူကြားမှာ ဖြစ်တည်မူတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလှသည်။ အမာတစ်ယောက် ဘမောင်ချိန်နှင့် အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက် ဘမောင်ချိန်နှင့် မိခင်ကြားက ပြသာပေါင်းစုံ ကိုရင်ကြားစေ့ရင်း သားသမီးရအောင် မကြိုးစားနိုင်တော့တာကြောင့် သားလေးတစ်ယောက် မွေးစားလာခဲ့သည်အဆုံး မိသားစုရေးရာမှာ အရေးပါခဲ့ရသည်။
မိသားစုရေးရာမှာ အဆင်ပြေလာခဲ့မှ London သို့ ပညာတော်သင်သွားရန် ရွေးချယ်ခံရမူမှာ အမာတစ်ယောက် ယောကျာ်း၊ သားနှင့် မိခင်တို့ကြားမှာ ဗျာများကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ခက်ခဲနေမှုကို ဘမောင်ချိန်က Congratulations လုပ်ကာ အတွေ့ကြုံသစ်ရယူရန် ခွင့်ပြုခဲ့မူများ ကြည်နူးစရာကောင်းလှသည်။ သမားတော်အဆင့်ထိ ကျောင်းဆက်တတ်ရန် ဆရာက ကမ်းလှမ်းသော်လည်း…. မိခင် ၊ သားနှင့် ယောကျ်ားတို့၏ လက်တွဲခိုင်မာစွာ ရှေ့ဆက်နိုင်ရန် ကျောခိုင်းပြန်လာခြင်းမှာ ရသပေါင်းများစွာ ရောပြွန်းနေခဲ့သည်။
ကိုလိုနီခေတ်က အောင်မြင်ကျော်ကြား မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဇတ်လမ်းကို ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ ကိုလိုနီခေတ်ကို တဖန်ပြန်လည် သက်ဝင်ခံစားကြည့်ခြင်းသည် တနင်္ဂနွေနေ့အတွက် တန်ဖိုးရှိခဲ့လှသည်။
ဦးပိစိ – November 26, 2020
ဒီစာအုပ်လေးဟာ စာဖတ်သူတွေကြားမှာရော စာအညွှန်းတွေမှာရော
ဒီအမာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို
ဒီလိုလုပ်လိုက်ရမှ စာအုပ်ကို ခံစားပြီးအရသာရှိတယ်လို့
အခါကာလသည်ကား ပန်ဒန်းမစ်ဆိုတော့ အကုန်လုံးက လော့ဒ်ချထားကြလေသည်။
စခရင်ပြားချပ်ပေါ်က အရုပ်ပန်းချီလေးသာ ခံစားရင်း မှာလိုက်မိလေသည်။
သဟဇာတ ဆိုတဲ့ မြန်မာဝေါဟာရကို
သူမကိုယ်တိုင် သူမဘဝတစ်ခုနှင့်ရင်းပြီး ပုံဖော်ခဲ့လေသည်။
အမာကတော့ သူ့ဘဝကို သူမကိုယ်တိုင်
ဒါက အမာစီစဉ်ခဲ့သည့် ဘဝတစ်ခုပေါ့။
ရွံ့ဆိုတာ ပထမတော့ အပျော့စားပေါ့။
ချစ်ခင်သူတွေနှင့်အတူ ကွဲကွာခြင်း ဒုက္ခဘေးဒဏ်၊
မြတ်နိုးရသော မိခင်နှင့် ချစ်ခင်ရသောလင်တော်မောင် တို့၏
သူမဘဝတိုးတက်ရေးမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော လောကဓံ တွေဟာ
ထို့အတူ သူမကို အောင်မြင်သူတစ်ယောက်အဖြစ် တွန်းပို့ခဲ့လေသည်။
ဒါက အမာကို မိမိမြင်ခဲ့သော
အမာ့ အမျိုးသား၏ အမာ့အပေါ် ထားရှိသော ယောက်ျားပီသမှုတစ်ခုပင်။
” သန်း…. ပိုက်ဆံကိုမစုနဲ့။
( 45 မှတ်ချက်)